UGoogle ubhengeza iindaba eziza kwiAuto Auto | I-Androidsis
IGoogle I / O 2018 iqala namhlanje, nangona kubonakala ngathi akufuneki silinde ukuqala kwayo ukuze sazi ezinye zeendaba eziza kuboniswa kuyo. Kungenxa yokuba uGoogle ngokwakhe ufuna ukuyilindela. Ikhampani ibhengeze ezona zinto zintsha zintsha zizayo kungekudala kwi-Android Auto. Ke sinokwazi izicwangciso zenkampani zale nguqulo yenkqubo yokusebenza.
Inani leziganeko zophuhliso ezibalulekileyo, ipheI-orque Android Auto ifumene uhlaziyo ezimbalwa ukusukela oko yasungulwa ngo-2015. Ke bamele ukomelezwa okubalulekileyo kuyo. Zizinto ezincinci zokuphucula, kodwa zithembisa ukuba zibaluleke kakhulu kwinkampani.
Ngokubhekisele kuyilo, akukho tshintsho kulindeleke kule nguqulo ye-Android. Ujongano luhlala lunye, ubuncinci okwangoku. UGoogle uyaqhubeka ngaphandle kokungenisa utshintsho kulo, oluhleli luguqukile ukususela ngo-2015. Enkosi kubo, abasebenzisi baya kuba namathuba amaninzi. Zeziphi iindaba eziza kufika?
1 Iitemplate ezintsha
2 Ukuphuculwa kophando
3 Imiyalezo yeRCS kunye namaqela
Okokuqala, sifumana iitemplate ezibonakalayo ezenzelwe abaphuhlisi besicelo semultimedia ukwenza umxholo wabo ufikeleleke ngakumbi. Lo mxholo uziswa embindini xa kuvulwa isicelo. Ukuze sikwazi ukumamela iingoma ngokukhawuleza, okanye iipodcast. Ke ukusebenza kwezi zicelo kufuneka kuphuculwe ngezi templates. Baya kusebenza ukubonelela ngezicelo ezinobushushu obukhulu ekusebenzeni kwazo.
Bayanceda nika uyilo olucocekileyo nolulula lomsebenzisi. Ngokukodwa ukuba semotweni akukho lula ukuba uyilo lube luhle.
Olunye uluvo oluza kwi-Android Auto kukuphucula uphando. Izicelo zemultimedia ziya kuba nethuba lokudibanisa iziphumo zazo zophando kwinkqubo yokusebenza. Eli luphawu olwenzelwe abaqhubi ukuba bafumane ngokukhawuleza iingoma ezinxulumene nengoma abafuna ukuyiva. Nokuba yinguqulelo eyahlukileyo yomxholo othethiweyo (i-acoustic, live okanye i-remix). Nangona ikwaligama elifanayo lengoma, kodwa ngamagcisa ahlukeneyo.
Ingasetyenziselwa ukukhangela ezinye iingoma ngumculi othile, kuba sinokuthi igama lomculi kukhangelo kunye noMncedisi kaGoogle uya kusinika iziphumo kumzuzwana. Iya kusebenza zombini iindlela.
Imiyalezo yeRCS kunye namaqela
Enye into entsha efikayo yile Inkxaso yemiyalezo yeqela, ukongeza kwimigangatho ye-RCS. Ngale ndlela, enkosi kuMncedisi kaGoogle, abaqhubi baya kuba nakho ukuncokola nabahlobo ngelixa beqhuba ngaphandle kokukhulula ivili nangaliphi na ixesha. Kuba i-Android Auto ayifuni ukuba umqhubi ayiyeke ivili, kunye neengozi ezilandelayo ezibandakanya oku.
Ngoko sinako sebenzisa le misebenzi kwezo zicelo zemiyalezo iyafumaneka kolu hlobo lwenkqubo yokusebenza. Kule meko, iiapps ezinje ngeTelegram, WhatsApp okanye iMiyalezo ye-Android ziya kuxhamla kulo msebenzi.
Ezi ndaba ziboniswe yi-Android Auto ziya kufikelela kuninzi lwezicelo ezifumaneka kule nguqulo. Okwangoku, ezinye zezicelo eziza kufumana olu phuculo sele ziqinisekisiwe. Phakathi kwabo sifumana iSpotify, iWhatsApp, iTelegram, iHeartRadio, iPandora kunye nePocket Casts.
Ngaphandle kwezi, Izicelo zikaGoogle nazo ziya kuzifumana. Kule meko ziincwadi zokudlala, Dlala uMculo kunye neMiyalezo ye-Android. Zonke ziya kuba nakho ukonwabela le misebenzi mitsha kwinguqulelo ye-Android yeemoto.
Iindaba ze-Android Auto ziya kufikelela kwiimoto ezifanelekileyo kunye nesicelo ngokwaso, esifumaneka ngoku kuGoogle Play. Okwangoku ayaziwa ukuba le misebenzi iza kufika nini, nangona inokutyhilwa kule veki. Kodwa akufuneki kuthathe ixesha elide ukufikelela kubasebenzisi basebenzisa olu hlobo lwenkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Iindaba ze-Android Auto esiza kuyibona kwiGoogle I / O 2018